Buugga cusub ee Martin Vrijland 'Xaqiiqada sida aan u aragnay' waxay diyaar u tahay gudbinta! : Martin Vrijland
Buugga cusub ee Martin Vrijland 'Xaqiiqada sida aan u aragnay' waxay diyaar u tahay gudbinta!
Waxaa la gaadhay waqtigii ugu dambaysay ee loo helo buugga cusub 'Xaqiiqada sidaan u aragnay'. Shalay waxaan aqriyay akhristayaasha buugga loogu talagalay Ebook Reader (ama e-Reader haddii aad rabto) iyo nooca PDF. Hadda laga bilaabo nooca buugga warqadda daabacaadda sidoo kale waxaa laga heli karaa webshop-ka boekbestellen.nl Qiimaha € 24,95. Hoos waxaad wali xubin ka noqon kartaa oo aad ku heli kartaa nooca e-akhriska oo aad akhrin kartaa nooca loo yaqaan PDF. Ma lihid Ebook Reader? Markaa kombiyuutarrada badankooda, laptops-yada ama i-pads-ka badanaa waad wali aqrin kartaa noocaan ah Ebook Reader. Kaliya si loo hubiyo, waxaan sidoo kale ku darayaa nooca loo yaqaan 'PDF' si aad ugu aqrin karto khadka tooska ah ee qalabka aad dooratay. Taasi waxay sidoo kale suurtogal ku tahay i-Pad ama taleefankaaga.
Buuggu wuxuu bixiyaa soo koobid wanaagsan oo ku saabsan xaqiiqada beenta ah iyo wadajirka ah ee Truman Show kaas oo bini-aadamka lagu qabto barnaamijka iyada oo laga bilaabo gogol ilaa qabriga. Buuggu wuxuu bixiyaa caddayn faahfaahsan, laakiin waxaas oo dhan waxaa la yimaada xal cad.
Qof kastaa wuxuu ku qaataa qaabab barnaamijyada barnaamijka min jilib ilaa iyo qabri. Buugani wuxuu muujinayaa sida barnaamijyadan loo qaabeeyey, sida qaabdhismeedka awoodeed loogu dhiso dunida iyo sida bini aadamka loogu qabto wada jir ah Truman Show (ka dib filimkii isla magacaas oo laga soo bilaabo 1998) is dhexgalka warbaahinta, siyaasada iyo mucaaradka la xakameeyay. Wuxuu sharraxayaa xaqiiqada markaan ka aragnay moodalka aragtida jilitaanka oo ku saleysan 'tijaabada' slits slits ', fisikiska taranka iyo aragtida miyirka. Waa waajib saaran qof kasta oo ku lug leh miyir, diin, caqiido iyo siyaasad.
Ujeedadaydu waxay ahayd inaan qoro buug mabda 'ahaan lagu akhriyi karo hal maalin oo aad siin karto qoyska ama saaxiibbada si ay uga fikiraan. Waan ku guuleysanay. Buuggu wuxuu ka kooban yahay bogagga 148 sidaa darteedna way fududahay in maalin la akhriyo.
Haddii aad mar hore xubin ka noqotay sannad oo aad rabto inaad ku hesho buugga qaab warqad ah, fadlan ii soo dir emayl leh cinwaankaaga.
Hoos waxaad ka soo dejisan kartaa nooca Ebook Reader ama akhrin kartaa nooca PDF. Waad heli kartaa labada faylasha ka dib markii aad xubin noqoto. Helitaan waxaa la siiyaa dahab iyo dhammaan xubinnimada sanadlaha ah. Kaliya xubnahaas ayaa ah xiriiriyeyaasha buugga hoose ee maqaalkan la arki karo. Kuwa kale waxay arkaan batoonka xubinnimada. Markii aad xubin ka noqotid, waxaad runtii iska diiwaangelinaysaa tabaruc ahaan, kaas oo aad igu taageerto inaan sii wado shaqadayda. Aad baad ugu mahadsantahay arintaas!
Cusboonaysii 5 Noofambar 2019, 15: 30 waqtiga: waxaad hadda sidoo kale ku dalban kartaa nooca e-akhristayaasha iyo PDF adigoo adeegsanaya webshop-ka hoosta badhanka buluugga ah.
Haddii, tusaale ahaan, aad ku taageertay lacag wareejin xilliyeed ama xubin xubin bil ah in muddo ah oo aad rabto inaad awoodid inaad akhrido buugga, fadlan nagala soo xiriir foomka xiriirka. Sababta aan u xaddiday xannibaaddaani waa sababta oo ah dadku waxay u akhriyi karaan buuggayga € 2 iyagoo marka hore xubin ka noqonaya bil ka dibna dib u kansali kara xubinnimada mar labaad.
Wada-hadal teleefan oo lala yeesho Wilson Boldewijn oo ka socda De Telegraaf: taxane ah oo ku saabsan aragtiyaha shirqoolka
Thijs H. PsyOp waxay qasaarisay sirta xirfad-yaqaanada, taas oo horay loo qabtay
Tags: buug, de, ka, featured, kennen, Martin, waddan lacag la'aan ah, xaqiiqada, wij, sida
5 November 2019 ee 21: 12
Halkan waxaan ku bogaadinayaa adkaysigaaga iyo sidaad ugu heellan tahay erayga madax-bannaan
inaad u fududaysay qof kasta qaab buug ah.
Fikradayda, waxaad u baahan tahay dabeecad adag iyo karti aad u weyn si aad u soo kabato
dadka miyir la 'ee lagu xadgudbay si ay u muujiyaan inta ay ku xadgudbeen oo ay isticmaaleen
awoodda damaca ee dalkan iyo meelo kaleba.
iyo hambalyo buuggaaga
6 November 2019 ee 15: 09
Ma aanan qaban dhibaatadiias oo dhan ee sannadihii 7 ee qoorta u sudhay naftayda iyo ukun dabayl dhabtii igama saarna. Taas bedelkeeda ... taasi wax badan ayey igu kacday.
Uma qorin buugga naftayda, laakiin si sax ah oo keliya oo loogu talagalay dadkaas oo dhan oo jeclaan lahaa inay wax u qabtaan kuwa waxoogaa ka warqaba xaaladda aan ku sugan nahay.
6 November 2019 ee 15: 46
Hi Martin, mar horeba dalbaday buuggaaga cusub.
Hambalyo oo sii wad macluumaadka! Kaliya waa loo baahan yahay.
« Xarumaha dhalinyarada waxay qeylodhaan ka muujinayaan gardarada maxaa yeelay 'daryeelka' runtii waa waxyeelo?
Adobe, Twitter iyo warbaahinta guud miyaan la dagaallami doonaan qoto dheer? »
Guud ahaan Wadarta: 13.815.545
SandinG op Weeraradu miyey bilaabeen? Psycholance waxaa horey loo siiyay iftiinka cagaaran ee 2018 iyadoo lagu saleynayo kiiska Els Borst / Bart van U.
2 camera op Weeraradu miyey bilaabeen? Psycholance waxaa horey loo siiyay iftiinka cagaaran ee 2018 iyadoo lagu saleynayo kiiska Els Borst / Bart van U.